Fiparitahan'ny valanarerina :: Narovana amin’ny kitrotro ireo mpiasan’ny oniversite • AoRaha
Fiparitahan’ny valanarerina Narovana amin’ny kitrotro ireo mpiasan’ny oniversite
Nanamafy ny fiarovana amin’ny valanaretina kitrotro sy pesta ireo tompon’andraikitra eny amin’ny Fakiolten’ny Fampianarana ho mpitsabo eo amin’ny oniversiten’ Antananarivo. Araka ny fantatra dia efa maro tamin’ireo mpianatra no voalaza fa voan’ny kitrotro raha tsy mbola nisy kosa ny voan’ny pesta.
Na izany aza nifantoka bebe kokoa tamin’ireo mpandraharaha sy mpiasa eo amin’ny oniversite ny hetsika izay notanterahana, omaly, raha heverina ho efa maharaka ny vaovao mahakasika izany ireo mpianatra noho ny fikarohana izay ataon’izy ireo. “Natao hanamafisana amin’ireo mpiasa eny anivon’ny oniversite fa tsy misy afa tsy ny fanaovana vaksiny ihany no afaka hisorohana ny kitrotro”, hoy ny profesora Razafindrabe Alberto Bam, iray amin’ireo mpandray anjara, omaly.
Nanamafy ihany koa ity tompon’andraikitra ity fa fandraisana anjara amin’ny ady ataon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka amin’ny famongorana ny kitrotro ity hetsika ity. Efa nitety ny Fakiolte samihafa ny tompon’ andraikitra talohan’ity notanterahina omaly ity. Fomba entin’izy ireo nandresy lahatra ny fampahafantarana ireo mpanatrika ny fiandohan’ny soritr’aretina. Mbola ao anatin’ny vanim-potoana fisian’ny pesta rahateo isika izao ary ao anatin’ny fotoana mampirongatra ny aretina kitrotro.